Aparece un HTC Aero muy similar al iPhone6| Androidsis
HTC Aero သည် iPhone6နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်
တရုတ်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်ယခုအချိန်တွင်ကောင်းမွန်သောအချိန်မရှိသေးပါ။ အသုံးပြုသူက၎င်းကိုအလွန်အမင်းယုံကြည်မှုမရှိတော့ပါ။ ပြိုင်ဆိုင်မှုသည်စွမ်းအားပြည့်ပြီးတတ်နိုင်သည့်ဆိပ်ကမ်းများထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်ပျက်စီးမှုများစွာကိုပြုလုပ်သည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဒီကျော်ကြားထုတ်လုပ်သူကကြေညာရန်ရှိသည်စေတော်မူပြီ ၎င်း၏လုပ်သားအင်အားလျှော့ချ ရရှိသောကြောက်မက်ဘွယ်သောရလဒ်များကိုကြောင့်။
ကောင်းပြီ, ဒီ ၀ န်ထမ်းများဖြတ်တောက်မှုအပြင်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာကိုပြောင်းလဲရန်လည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမကြာမီထွက်ပေါ်လာမည့်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိဆိပ်ကမ်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဒီကိရိယာကိုခေါ်မယ် HTC Aero ၎င်းကို HTC A9 ဟုလည်းလူသိများသည်။ ဤ terminal နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်သာကျွန်ုပ်တို့သိကြသော်လည်းအနာဂတ်တရုတ်ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးပေါက်ကြားမှုများပေါ်ထွက်လာပြီးဖြစ်သည်။ ဤပေါက်ကြားမှုတစ်ခုသည်နာမည်ကျော်တရုတ်လူမှုရေးကွန်ယက်ဖြစ်သော Weibo တွင်ပုံနှိပ်ထားသောပုံသဏ္comesာန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်စမတ်ဖုန်း၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
iPhone6နှင့်အလွန်ဆင်တူသည့် HTC Aero?
ကျောဘက်မှာ Apple ရဲ့ iPhone6ရဲ့နောက်ဖက်ကိုသတိပေးတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်း။ ၎င်းသည် Photoshop ပါသည့်ပုံဖြစ်သည်ဟုထင်နိုင်သော်လည်းအနာဂတ် high-end terminal တွင်ထိုရှုထောင့်ရှိကြောင်းအရာအားလုံးကဖော်ပြသည်။ အရှေ့ဘက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြည့်လျှင် device ၏၎င်း၏နှစ်ဖက်စလုံးနှင့်အထက်နှင့်အောက်ဘောင်များ၌အလွန်အရေးမပါသည့် frames များကိုမည်သို့မြင်တွေ့ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည်။
ဤထိပ်တန်းအဆင့်မီ terminal သည် HTC သည်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာရန်လိုအပ်သည့်ထုတ်ဖော်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ hardware သည်ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သင့်သည်။ HTC Aero ကိုဖုန်းတပ်ဆင်ထားမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် သင့်အကာအကွယ်အတွက် 2.5D ကွေးဖန်နှင့်အတူ 4GB RAM မှတ်ဉာဏ်ပရိုဆက်ဆာ၊ cores ဆယ်ခုအဆိုပါ Helio X20 MediaTek မှထုတ်လုပ်သည်၊ ၃၅၀၀ mAh ဘက်ထရီနှင့်မည်သည့်စမတ်ဖုန်းတွင်မှယနေ့တိုင်မတွေ့ရသေးသောဆန်းသစ်သောကင်မရာ။
ဒီကိရိယာနှင့်တကယ်ဖြစ်ပျက်သည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်း၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်သည် Cupertino မှစမတ်မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် HTC ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုဂရုပြုကြလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာယခင်ကကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောအချိန်ကိုဖြတ်သန်းနေခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်လာမည့်လများအတွင်းဤကုမ္ပဏီ၏လှုပ်ရှားမှုများစွာရှိနိုင်သည်။ ဤထင်မြင်ချက်သည် HTC Aero ကိုနောက်နှစ်အထိဈေးကွက်ထဲမ ၀ င်နိုင်တော့သောကြောင့်၎င်းထုတ်လုပ်သူသည်မည်သည့်အရာကိုပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုမြင်နိုင်ရန်အနည်းငယ်ရှိနေသေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC Aero သည် iPhone6နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်
အခုတော့ htc ကိုကော်ပီကူးလိုက်ပြီ။ ပထမ ဦး ဆုံးသတ္တုနှင့်အဖြူရောင်ပလတ်စတစ်လိုင်းများနှင့်အတူဒီဇိုင်းရှိသနည်း HTC !! ယခုတွင်ငါသည်အခြားသူများကသူတို့ကပန်းသီးကိုကူးယူသည်ဟုဆိုကြသည်မှာ android တွင်အသုံးပြုသောအရာများပါဝင်ခြင်းသည် iPhone6၏ရှုထောင့်များစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Si fuera solo HTC, MIUI al completo, sensores de huellas dactilares, ZTE y su nuevo y revolucionario «force Touch», soporte Flash, Politica de permisos de Apps, el «one More Thing» de xiaomi en las presentaciones… Apple es la mas copiada con diferencia.
၎င်းသည်လုံးဝမမှန်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် iPhone6၏ပုံသဏ္iPhoneာန်ကို Android တွင် iPhone XNUMX မပေါ်မီကြာမြင့်စွာကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Link Bubble ဝဘ်ဘရောက်ဇာသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်လာသည်
၁၈.၄ လက်မရှိပြီး Android တက်ဘလက်တစ်ခုတွင် Samsung ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်